Umbhobho oMnyama oMnyama oMnyama weBhafu | WOWOW Isinqe seFinki
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / WOWOW Isitya seepompo zesinki Matte Mnyama
I-Matte Black Bathroom faucet ikunika uyilo kunye nomgangatho lube lunye. Intsebenzo enomdla kwaye
isitayela esihle kakhulu. Ivenkile yethu matte yokuhlambela emnyama faucet ngoku!
2321501B imiyalelo yokufaka
Matte emnyama igumbi lokuhlambela ifowuni 2321501B
Ukuyila igumbi lokuhlambela lakho liphulo elinomvuzo. Nangona uhlala ungachithi ixesha elininzi kwigumbi lokuhlambela, unokuyisebenzisa le ndawo ukuphumla ixesha elide, umzekelo kwi-whirlpool yakho. Nokuba yeyiphi indlela, awuzukungajongeli phantsi ifuthe loyilo lwakho lokuhlamba. Kufanele ukuba yinxalenye yoyilo olupheleleyo lwendlu yakho kwaye ifanelwe lixesha lakho lokuyicinga kakuhle ngokwemiyile yoyilo kunye nokusebenza kwayo.
Igumbi lokuhlambela linokukunika iseti efanelekileyo yokuyila nokusebenza kwayo. Ukusebenza kweyona nto ibaluleke kakhulu, njengoko amaxesha amaninzi ufuna ukusebenzisa imisebenzi esisiseko yegumbi lakho lokuhlambela. Umzekelo ukuthatha ishawa kunye nokuxubha amazinyo akho xa ungxama ngokukhawuleza kusasa. Kwelinye icala, ngakumbi xa ukwimeko yokuhlaziyeka ngakumbi, unokuyonwabela uyilo lwakho lokuhlamba, uphumle kwibhafu yakho yokuhlambela umzekelo. Into elungileyo yoyilo lwegumbi lokuhlambela kukuba, ungafaka yonke indalo yakho kuyo. Kukho izigidi zeendlela zokukhetha xa uyila igumbi lokuhlambela, kwaye nantoni na oyithathayo, uya kuba nesidima esingafaniyo nomnye umntu. Nguwe kuphela oyilo wayo. Unokuzifumana uphefumlelwe ngeemagazini kunye neewebhusayithi, kodwa ekugqibeleni nguwe othatha isigqibo sokuba igumbi lakho lokuhlambela liza kujongeka njani.
Isikhephe sokuhlambela somngxunya omnye kubumnyama
Xa uyila igumbi lakho lokuhlambela elilungileyo, akufuneki ungayijongeli phantsi ifuthe lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela. Njengamagumbi okuhlamba igumbi lokugxila kwendalo nakuyiphi na indawo yokuhlambela, abantu bahlala bejonga iifesitile zakho ekuqaleni. Ke ngoko kuya kufuneka usoloko ukhetha iifayile zegumbi lakho lokuhlambela ngononophelo. Ngaphandle kokusebenza, ufuna igumbi lakho lokuhlambela ukuba likukhuthalele kwaye ubonise isitayile ozithandayo. Oko kuthetha ukuba akusokuze uyeke ukhetho kuhlobo lweefesitile zokuhlamba de kube sekupheleni xa sele usakha igumbi lakho lokuhlambela. Kuya kufuneka ukuba wenze ikhitshini lasekhitshini sele liyinxalenye yoyilo lwakho lwegumbi lokuhlambela.
Ngokumalunga nokuntywila kwegumbi lokuhlambela, unokukhetha kwiintlobo ezahlukeneyo zeefesitile zeshishini lokuhlambela. Unokukhetha iipheyile zokuphatha ezimbini zebhedi okanye isitayile esinye sokuhlambela kwigumbi lokuhlambela. Iefestile zokuqubha zangasese enye ziyaziwa njengezitshitshisi zegumbi lokuhlambela elinye. Olona ncedo luphambili lokuphatha isitya sokuhlambela kukuba uyakwazi ukulawula ubushushu bamanzi ngesinye isandla. Olunye uncedo lunento yokwenza nokulula kokufaka. Njengoko ufuna umngxunya omnye, kulula kakhulu ukufaka isitampu sokuhlambela somngxunya omnye. Imitya yokuhlambela yomngxunya enye iza zonke iintlobo zezitayile kunye noyilo. Isuti yokuhlambela emnyama matte ye-WOWOW ikunika uyilo oluhle olufana ngqo ne-gooseneck kumbala obukhali kwaye owahlukileyo.
Isitayile esimnyama kunye nesisebenzayo sematte emnyama yokuhlambela
Isikhephe esimnandi kodwa esisebenzayo seteyile emnyama yokuhlambela yeWOWOW ilula kwaye ayinaxesha. Zonke ii-intshi zeli candelo lihle lezixhobo zegumbi lokuhlambela zenziwe ngobuchule ukuze zikwazi ukumelana nayo nayiphi na into yokubola okanye ukukrala. Ke ngoko kusoloko kunokwenzeka ukuba uhlambe kwaye ugcine le matte yokuhlambela imnyama faucet kakuhle ukuyigcina imile ngokufanelekileyo. Umgaqo omnyama wodwa wokupheka unefenki yegumbi lokuhlambela ngenkangeleko yala maxesha eya kuthi ibumbe isitayile esiyinxalenye yayo nayiphi na igumbi lokuhlambela. Ngaphandle koko unokufumana iifayile zegumbi lokuhlambela ezifanayo nesisitovu sokuhlambela kunye nomzekelo, ukwenza icandelo elinye elinobunye kunye negumbi lakho lokuhlambela.
Isikhenkci esine-arc matte esimnyama sokuhlambela sibonisa intsholongwane esebenzayo ye-gooseneck ye-5.8 intshi. Indawo yokuntywila kwigumbi lokuhlambela inika ukufikelela okwaneleyo kokuhlamba okukuko. Ukuhamba kwamanzi kugudile kwaye kuzinzile. Ngaphandle koko, le spout ekumgangatho ophezulu yi-anti-splatter, ngoko ke awuyi kumanzi impahla yakho ngelixa uzihlamba kwindawo yokuhlambela. Ekugqibeleni awunyanzelekanga ukuba wandise iintende zakho ukufikelela emanzini, njengoko uyilo lwentengiso ye-gooseneck ikunika amanzi apho uwafuna khona. Ukugqibezela uyilo lwakho, uya kufumana isitopu sogonyo esiqukeneyo ukuze senze indibaniselwano efanelekileyo kwisitya sokugezela sakho.
Matte emnyama igumbi lokuhlambela esemgangathweni esemagqabini
I-Wowow isebenzisa ezona zixhobo ezisemgangathweni zegumbi lokuhlambela layo. Amaziko ayo emveliso yobugcisa aqinisekisa amanyathelo afanelekileyo kunye nokulinganisa kuwo onke amacandelo awo. Isikhephe sokuhlambela seWOWOW ke iyunithi enye ebaluleke kakhulu eyenzelwe ukusebenza kakuhle. Ngaphandle kwento le mveliso iyahambelana nokufakelwa kwensimbi ye-American Conencyional. Idiski ye-ceramic-free ceramic yediski yokuhlambela emnyama ye-WOWOW itywinwe ngokuqinileyo. Uhlalutyo lubonisa ukuba idisk-free yedisk ye diski ayisalunganga emva kwemijikelezo engama-500,000.
Isibambo se-lever se-matow yokuhlambela emnyama ye-matte ibhetyebhetye kakhulu. Unokulawula ngokulula ubushushu bamanzi kwaye nangona kunjalo inikezela ukubamba okwaneleyo ukulawula amaqondo obushushu angahambi. Ukongeza, i-matte faucet yokuhlambela emnyama inokuqina okuzinzileyo njengoko umzimba we-faucet wakhiwa ukusuka kubhedu oluqinileyo ngokudibeneyo kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu. Xa ubambe le matte faupet yokuhlambela imnyama yeWOWOW ezandleni zakho, ngokukhawuleza uqaphela umgangatho ekubonelela ngawo.
Ixabiso elifanelekileyo elinamatikiti amnyama okumgangatho wokuhlambela omnyama
Usebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu, i-WOWOW isakwazi ukukunika le faetet emnyama nekhitshi ngexabiso elifanelekileyo. I-WOWOW okokuqala iyazi ukuba ungazithenga phi izinto ezingavuthi ngexabiso elifanelekileyo. Okwesibini, amaziko emveliso aphezulu e-WOWOW aqinisekisa ngenkqubo yexabiso eliphantsi. Ngale ndlela uya kuxhamla kwezi zibonelelo kwaye uqinisekisiwe ngesitayile esincinci somgangatho wokuhlamba impahla omnyama omnyama ngomgangatho wexabiso elifanelekileyo oya kulifumana. Xa uthenga i-matte yokuhlambela emnyama ye-WOWOW, uya kufumana yonke into oyifunayo ukufaka le matte yokuhlambela imnyama yokuhlambela ngokulula. Ngaphandle kwesithinteli sedreyini yokuqubha, indawo yokuhamba emxholweni yokufaka umngxunya ongu-1 okanye 3 ibandakanyiwe. Uya kufumana unxibelelwano lwamanzi olufunekayo ukwenza ukufakwa ngokulula kunokwenzeka. Zonke izinto zokuhlanjwa kwegumbi lokuhlambela le-WOWOW ekugqibeleni liza nexesha elipheleleyo lewaranti yeminyaka emi-5, isiqinisekiso sokubuya semali seentsuku ezingama-90 kunye nokuhanjiswa simahla kwamazwe aphesheya!
Izibonelelo zesitayile sokuhlamba igumbi lokuhlambela elimnyama ngezantsi:
 Imibala emnyama ye-matte
 Uyilo lwasesilenzeni lwangoku
 Kulula ukudibanisa nezinye iitayile zokuhlambela ezimnyama
I-SKU: 2321501B iindidi: Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: iplate yedesika, isikulufu esixhonyiweyo, isinki yokuntywila
23.5 x 11.7 x 3 intshi